Apple dia mieritreritra ny hanokatra fivarotana antsinjarany any Korea Atsimo | Vaovao IPhone
Alejandro Cabrera | | Apple Store, About us
Tatitra avy amin'ny Wall Street Journal antsipiriany fa Apple mikasa ny hanokatra ny magazay voalohany any Korea Atsimo, ny tranon'ilay mpifaninana aminy lehibe indrindra, Samsung. Toa mitady hanokatra Apple Store voalohany ao amin'ny firenena io orinasa io, eo ampitan'ny arabe manoloana ny foiben'ny Samsung any Seoul.
Ny foiben'i Samsung ao Gangnam-gu, Seoul, dia manana fivarotana amam-borona manjelanjelatra, mivelatra misy rihana telo ity fivarotana ity dia iray amin'ireo fivarotana Samsung izay mivarotra fitaovana betsaka indrindra.
Ny loharanom-baovao dia manondro fa ny drafitr'i Apple dia mbola tsy vita ary mety hitarika any amin'ny orinasa Cupertino farafahakeliny herintaona hanokafana ny fivarotanao voalohany any Seoul, raha toa ka manohy ny drafitra fanitarana ny orinasa izy amin'ny farany.
Any Etazonia, Samsung matetika no manokatra fivarotana lehibe indrindra akaikin'ny fivarotana Apple. Any Korea Atsimo kosa dia toa navadika ny andraikitra.
Korea atsimo, toekarena fahefatra lehibe indrindra any Azia, dia tsena sarotra ho an'i Apple. Ny tsena Koreana Tatsimo dia anjakan'ny Samsung sy LG, saingy miaraka amin'i Apple ny fivarotana ny fitaovana ampiasainy amin'ny alàlan'ny mpivarotra sy ny mpaninjara ao amin'ny firenena dia hihena isan-jato. Ny orinasa Cupertino dia manana latsaky ny 10 isan-jaton'ny tsenan'ny smartphone ao Korea Atsimo, raha LG sy Samsung dia mitambatra mba hitazonana ny tsena 80 isan-jato.
Ny fanokafana ny Apple Store anao dia azo antoka fa hanampy amin'ny fanamafisana ny fisianao any Korea atsimo ary tokony hanampy amin'ny fampitomboana ny anjaranao amin'ny firenena. ankehitriny mijanona eo ny miandry ny fihetsiky ny Samsung mifandraika amin'ny fanokafana na tsia ny fivarotana ao amin'ny "tokotanin'ny" tranonao i Apple.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Apple dia mieritreritra ny hanokatra fivarotana antsinjarany any Korea Atsimo
Mandany bateria be ve ny iOS 10? Amboary amin'ireto toro-hevitra ireto